I-Federalism: Amandla okubuyisela uRhulumente kwi-States
Imiba Isiseko kunye neMbali
Inkcazo ye-Federalism: I-Case for Reinvigorating Rights's Rights
by UMarcus Hawkins
I-Federalism ikhuthaza ukubuyela kumarhulumente asemthethweni
Inkqubela eqhubekayo ngokugqithiseleyo ubukhulu kunye nendima yombuso karhulumente, ngokukodwa njengoko kuhambelana neengxabano kunye noorhulumente karhulumente ngaphezu kwamagunya omthetho. I-Conservatives ikholelwa ukuba oorhulumente boorhulumente nabemi basekhaya kufuneka banikwe amandla okusingatha imiba yasekhaya njengempilo, imfundo, ukufudukela kwamanye amazwe, kunye neminye imithetho eninzi yentlalo kunye nezoqoqosho. Le ngcamango yaziwa ngokuba yi-federalalism kwaye iyabongoza umbuzo: Kutheni i-conservatives ixabisa ukubuyisela kurhulumente osemthethweni?
Kukho umbuzo omncinci ukuba inxaxheba yangoku yeburhulumente karhulumente idlulele kunanto esicatshangelwa ngabaqashi. Kuye kwacaca ukuba ithathe iindima ezininzi ezazisetyenziswe ekuqaleni. NgokomGaqo-siseko wase-United States, ootata abasisiseko bazama ukunciphisa ubunzima beburhulumente ophakathi kunye kwaye, eneneni, banikezela urhulumente wezemfundo uluhlu oluncinci lwemisebenzi. Babenomuvo wokuthi urhulumente wesigqeba kufuneka akwazi ukujongana nemiba ebenokuba nzima okanye engenangqiqo kumazwe okujongana nayo, njengokugcinwa kwemisebenzi yemikhosi kunye nokukhusela, ukuxoxisana namazwe angaphandle, ukudala imali kunye nokulawula urhwebi kumazwe angaphandle.
Eyona nto, amazwe ngamnye aya kuthi ayenze ukujongana nemicimbi ebenokuthi bayakwazi. Abasunguli baye baqhubela phambili kwiBhili yamaLungelo eMgaqo-siseko wase-US ukwenzela ukuthintela urhulumente wephondo ukuba athathe amandla amaninzi.
Iinzuzo zoButhixo boBurhulumente obunamandla
Enye yeenzuzo ezicacileyo zorhulumente obuthathaka obuthathaka kunye noorhulumente benamandla onamandla kukuba iimfuno zomntu ngamnye zilawulwa kalula. I-Alaska, iIowa, iRhode Island kunye neFlorida zizo zonke izimeko ezahluke kakhulu, izibalo kunye nexabiso.
Umthetho onokuba nengqiqo eNew York usenokungaqondi kakuhle e-Alabama.
Ngokomzekelo, amanye amazwe athe aqikelela ukuba kuyimfuneko ukuthintela ukusetyenziswa kwezixhobo zomlilo ngenxa yokusingqongileyo. Abanye abanazo iingxaki kunye nemithetho yabo ivumela umlilo. Ayinakuba yinto ebalulekileyo ukuba urhulumente wesigqeba enze umgaqo owodwa ofanelekileyo kuwo onke amazwe avimbela umlilo xa iindawo ezimbalwa kuphela zifuna umthetho onjalo. Ukulawulwa koMbuso kunika amandla ukuba benze izigqibo ezinzima kwiindawo zabo zentlalo kunokuba nethemba lokuba urhulumente wephondo uza kubona 'ingxaki yelizwe njengento ephambili.
Urhulumente okarhulumente onamandla unika abemi ngezindlela ezimbini. Okokuqala, oorhulumente benarha basabela kakhulu kwiimfuno zabemi belizwe labo. Ukuba izinto ezingabalulekanga zingabhekiswa, abavoti bangabamba ukhetho kwaye bavotele abaviwa abavakalelwa ukuba bafanelekile ukujongana neengxaki. Ukuba umcimbi ubaluleke kakhulu kummandla omnye kunye nekarhulumente karhulumente anegunya phezu kwaloo mbandela, ke abavoti bendawo abanempembelelo encinci yokufumana utshintsho abayifunayo-bayingxenye encinci ye-electorate enkulu.
Okwesibini, oorhulumente bamandla karhulumente bavumela abantu ukuba bakhethe urhulumente olufanelekileyo ngokubaluleka kwabo.
Imindeni kunye nabantu ngabanye banako ukukhetha izinto ezingenayo okanye irhafu engenayo ephantsi okanye iindawo eziphezulu. Bangakwazi ukukhetha amazwe ngemithetho ebuthakathaka okanye eqinile kwimithetho, okanye ngokuthintela umtshato okanye ngaphandle kwabo. Abanye abantu banokukhetha ukuhlala kwimeko enika uluhlu olubanzi lweenkqubo zikaRhulumente kunye neenkonzo xa abanye bengenako. Kanye nje ngokuba imarike yamahhala ivumela abantu ukuba bathathe kwaye bakhethe iimveliso okanye iinkonzo abayithandayo, ngoko banokukhetha ukhetho olulungele ukuziphatha kwabo. Urhulumente wezepolisi ogqithiseleyo unqanda lo khetho.
Ingquzulwano phakathi koorhulumente karhulumente kunye nolawulo luya kuba yinto eqhelekileyo. Njengoko urhulumente wesigqeba ukhula ngakumbi kwaye uqala ukubeka amanyathelo axabisekileyo kumazwe, amazwe aqale ukulwa. Nangona kukho imizekelo emininzi yemibhikano yombuso-nkqubo, nakhu iziganeko ezimbalwa eziphambili.
UMthetho wokuNakekelwa kwezeMpilo kunye noMthetho wokuXhuma eMfundweni
Urhulumente wesigqeba uzenzele ubungakanani obukhulu bamandla kunye nokuhamba kwe-Health Care kunye noMthetho Wokubuyisana Kwezemfundo ngo-2010, obangela imimiselo enzima kubantu, kwiinkampani nakwamanye amazwe. Isigatshana somthetho esabangela ukuba u-26 uthi ufake isigwebo sokufuna ukuguqula umthetho, kwaye baxela ukuba kwakukho imithetho emitsha emininzi eyayingenakukwazi ukuphumeza. Nangona kunjalo, lo Mthetho uphumelele.
Abameli bezomthetho baxela ukuba amazwe kufuneka abe negunya elikhulu lokumisela imithetho malunga nokunyamekelwa kwezempilo. Umviwa kaMongameli uMitt Romney wadlulisela umthetho wokunakekelwa kwempilo kwilizwe lonke xa wayeyinkosazana yaseMassachusetts engazange ithandwe ngabantu abaxhasayo, kodwa ibhilikhwe yayithandwa ngabantu baseMassachusetts. U-Romney wathi le nto kutheni urhulumente karhulumente kufuneka abe namandla okuphumeza imithetho efanelekileyo kwilizwe lawo.
UMthetho we-American Health Reform Act ka-2017 waqalwa kwiNdlu yabameli ngoJanuwari 2017. Indlu yadlulisela ngevoti encinci ye-217 ukuya ku-213 ngoMeyi 2017. Ibhali-mali idluliselwe kwi-Senate, kwaye iSeti ibonise ukuba iya kubhala inguqulo yayo. Lo Mthetho uza kuphelisa imibandela yokunakekelwa kwempilo yoMthetho wezeMpilo kunye noMthetho wokuXhobisa iMfundo ka-2010 ukuba udluliselwe kwifom yangoku.
Ukungena kwamanye amazwe
Enye into ebalulekileyo yokubambisana iquka ukungena kwamanye amazwe ngokungekho mthethweni. Uninzi umda onjengeTexas neArizona bebekho kwimida yangaphambili yalo mbandela.
Nangona kunemithetho eqinile yombutho ojongene nokufuduka okungekho mthethweni , ukulawula kwangaphambili kunye nekhoyo okwangoku kweRiphabhlikhi kunye neDemocratic baye banqaba ukunyanzelisa imigaqo emininzi. Oku kuye kwabangela ukuba amazwe amaninzi adlulise imithetho yawo elwa nokunyuka kwamanye amazwe angekho mthethweni kwilizwe lawo.
Omnye umzekelo ngu-Arizona, owadlula iSB 1070 ngo-2010 waza wagwetshwa ngu-Obama weSebe lase-US e-Justice ngenxa yamalungiselelo athile emthethweni. I-state ichaza ukuba imithetho yabo iyafana nemithetho yombuso karhulumente ongaqinisekanga. INkundla ePhakamileyo yagweba ngo-2012 ukuba izibonelelo ezithile ze-SB 1070 zazingavunyelwe ngumthetho wasemthethweni.
Kukho amaninzi amaninzi amatyala okukhwabanisa kwimizila eminyulo edlulileyo, kunye neziganeko zokuvota ezithatyathwa ngamagama abantu abasanda kutshona, izibango zokubhaliswa kabini, kunye nokungabikho kobuqhetseba bokuvota. Kwamazwe amaninzi, ungabonisa nje ukuvota naliphi na igama elibhalisiweyo kwaye uvunyelwe ukuvota ngaphandle kobungqina bokuba ungubani. Ininzi yezizwe ziye zafuna ukwenza umyalelo wokubonisa i-ID ekhutshwe nguRhulumente ukuvota, ebonakalise ukuba isingqiqo kunye nengcamango eyaziwayo phakathi kwabavoti.
Enye yelo lizwe yiSouth Carolina, eyadlulisela umthetho oya kufuna ukuba abavoti banikeze i-ID yesimboli esesikhutshwe nguRhulumente. Umthetho awubonakali ngokungenangqiqo kuba kukho imithetho efuna ii-ID kuzo zonke iintlobo zezinye izinto, kubandakanywa ukuqhuba, ukuthengwa kotywala okanye iteksi, kwaye indiza kwindiza.
Kodwa kwakhona, i-DOJ yazama ukuphazamisa nokukhusela iSouth Carolina ekumisekeleni umthetho. Ekugqibeleni, iNkundla yesiBheno yeSibheno se-4 "yaphakamisa" ... uhlobo, kwaye emva kokuyibhala kwakhona. Sekunjalo, kodwa ngoku i-ID ayisadingekile ukuba umvoti uya kuba nesizathu esihle sokungabi nalo.
Kuhlala kungenakwenzeka ukuba ubukhulu beburhulumenteni buya kubuya kwendima eyayijoliswe ekuqaleni. I-Ayn Rand iye yaqaphela ukuba kuthathe iminyaka engaphezu kwe-100 ukuba urhulumente wezepolitike abe nomkhulu njengoko unayo, kwaye ukuguqula umgangatho uya kuthatha ngokulinganayo. Kodwa i-conservatives kufuneka ixubushe ukubaluleka kokunciphisa ubukhulu kunye nobubanzi boburhulumente bombuso kunye nokubuyiselwa kwamandla kubuya kwilizwe. Kucacile ukuba, injongo yokuqala yokugcina i-conservatives kukuqhubeka nokukhetha abaviwa abanamandla okuyeka ukunyuka kolawulo olusakhulayo.
Ziziphi i-Low-Information Information Voters?
Impendulo yeNkundla ePhakamileyo yeJaji uJohn Roberts
Yintoni iMiddle East?
AmaKuraysh Tribe eMecca
Iimviezo ezingcono zezobupolitika ezingabikho kwezoPolitiko zexesha lonke
Iimbono ze-Conservative kwiNgqungquthela yesithathu kuMgaqo-siseko wase-US
Kutheni i-Conservatives ixhasa iSihlomelo sesiBini kwaye iVulele ukuLawula i-Gun
Ngaba iFlorida i-Conservative State?
Iimali eziphakamileyo ze "Iityebi" Ekugqibeleni zibuhlungu Abahluphekayo
Iyintoni i-Conservatism yeFiscal?
I-Vocab I-Worksheet 1
Indlela Ukufunda I-Cloze Kungasetyenziselwa Ukuqinisa Ukufunda
Indlela Yokubamba I-Putter: Ngokuqhelekileyo Ukubeka iiGrips kunye nePros and Their Cons
Umthetho weBili Buddhist
5 Abalawuli Abaqalayo iiFilimu beBlockbusters
Imfazwe YaseMelika: I-General General Horatio G. Wright
Kutheni iYilwayo yamaLungelo ebalulekileyo?
Iingcinga Zemihla Ephakathi
Uluhlu lweengoma eziphezulu zeManá
Yenza i-"Inner Smile"
Oko kuthetha ukuba ngumphathi weTrust
I-Weird, i-Weird West: I-Horror-Western Movies
'UDkt Jekyll noMnu Hyde 'Quotes
UMary Wright u-Edelman
Kutheni abantwana bekhetha ukukhipha isisu
Ngaba Iingelosi Eziwa Ziyabonayo?
Ukudibanisa amaFaro ase-Nubian angamashumi amabini anesibini eYiputa
Ixesha lokusebenzisa i-Subjunctive ne-'I-Est Est kungenzeka '
Indlela yokuchitha i-Ethanol okanye i-Grain Alcohol
Imfazwe ye-1812: iMfazwe yaseBeverver
'On y Va' ('Makhe siye') Ngaba ummemo waseFransi, uMyalelo, nombuzo
I-Sycamore - Hhayi nje i-Planetree